तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा भारतमा खेति गरिएको अनुमान गरिएको छ । दार्शनिक हिप्पोक्रेटसले तोरीका दानालाई केही निश्चित खालका औषधि बनाउन प्रयोग गर्थे । रोमनहरुले यसलाई रक्सी बनाउन प्रयोग गर्थे भने ग्रिकका प्रख्यात गणितज्ञ पाइथागोरसले बिच्छीले टोकेको उपचारमा प्रयोग गर्थे । यसका साथै तोरीको तेल भारत तथा नेपालमा खाना पकाउन प्रयोग हुँदै आएको छ । तोरीको तेलमा ६० प्रतिशत मोनोस्याचुरेटेड फ्याट (मुफा), २१ प्रतिशत पोलीअनस्याचुुरेटेड फ्याट (पुफा) र १२ प्रतिशत स्याचुुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यी…
रामू ओली ‘रविन्द्र मिश्रले गरे पार्टी कार्यालयमै रञ्जु दर्शना माथि बलात्कार प्रयास’ ‘निर्मला हत्याकाण्डको रहस्य बाहिरियो, यसरी पत्ता लाग्यो दोषी’ ‘फलानोको दुखद निधन’ आदि आदि… यी केही अनलाईका समाचार शीर्षक हुन् । विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो । त्यस लगत्तै एउटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । रबिन्द्र मिश्रले पार्टी कार्यालयमै रन्जु दर्शना माथि बलात्कारको प्रयास । यो समाचार केही मान्य गन्य भनिएकाहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल सेयर गरे । व्यापक टिका टिप्पणी भयो । समाचार यसरी भाइरल भयो कि रन्जु दर्शनाले चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा केही अन्लाईन पोर्टलविरुद्द साइबर अपराध अन्तर्गत…
विजय ज्ञवाली जहाजले उडाउँदैन मात्रै, डुबाउँछ पनि । अझ नेपालको हकमा भन्ने हो भने जहाजले निगमलाई बारम्बार डुबाउँदै आएको छ । निगम डुब्नु भनेको राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति डुब्नु हो । राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति डुब्नु भनेको सरकार डुब्नु हो, देश कङ्गाल बन्नु हो । सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि नैतिक आचरण देखाउन नसक्नु नैतिक पतन हो। सार्वजनिक बेइज्जती हो। योग्य र क्षमतावान् ठहर्याएर नै सरकारले त्यस्ता ब्याक्तिलाई विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुन्छ, त्यो पनि असीमित अधिकार र सुविधासहित। तर, त्यहीँ सुविधाको सदुपयोगको साटो दुरुपयोग बढी भयो भने परिणाम के हुन्छ…
रफ्तारमा रहेको जिन्दगीमा हरेक काम फटाफट हुनुपर्छ । भनेपछि खानपानमा किन ढिलाइ ? फलफूल खाएर समय किन खेर फाल्नु ? फलको जुस निकाल्यो, खायो अनि हिँड्यो कामतिर । समय पनि जोगिन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो । साँच्चै ? के फलफूलको रस निकालेर पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ त ? अहिलेका कामकाजी मान्छेहरुसँग समय नभएकाले फलफूलको रस पिउने चलन छ । फलफूल चपाएर खाने समय कहाँ र ? बिहानै जुस बुत्यायो कामतिर कुद्यो । स्वास्थ्यको चिन्ता पनि दूर भयो । धेरैको बुझाइ छ कि जु शरीरमा रहेका बिकार निकाल्न सहयोग गर्छ। यसैको…
ओलिभ ओइल प्राकृतिक तेलले छालालाई मुलायम बनाइराख्न निकै सहयोग गर्छ । हाम्रो छालालाई सुक्खा हुनबाट बचाउन ओलिभ तेलबाट महत्वपूर्ण फाइदा लिन सक्छौँ । ओलिभ तेललाई तपाईंको शरीरमा मजाले दल्न सक्नुहुन्छ । यसमा हुने एन्टिअक्सिडेन्टले छालालाई नरम र चिल्लो बनाउन सहयोग गर्छ । ड्यामेज्ड सेलहरूलाई पुनर्जीवित गराउँछ । यसले बढ्दो उमेरको कारण छाला चाउरिने समस्याबाट समेत मुक्त गराउँछ । मह सुक्खा छालाका लागि एकदम सही मोस्चराइजर हो, मह । मह लगाएर मजाले मसाज गरी दश मिनेटसम्म राख्नुपर्छ । त्यसपछि मनतातो पानीले पखाल्नुहोस् । दैनिक यो कार्य गरे तपाईंको छालामा केही दिनमा नै प्राकृतिक रूपमा चमक देख्नुहुन्छ । नरिवलको तेल नरिवलको तेल…
हाच्छिउँ रोक्ने प्रयास तपाईंको लागि प्राणघातक हुन सक्छ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ? डाक्टरहरुका अनुसार, हाच्छिउँ आउँदा यसलाई रोक्न यदि तपाईंले नाक र मुख बन्द गर्नुभयो भने गम्भीर चोट लाग्न सक्छ। इंग्ल्यान्डको लेस्टर शहरमा ३४ वर्षीय एक व्यक्तिको उपचारको क्रममा के पत्ता लाग्यो भने, हाच्छिउँ रोक्ने कोसिसका कारण उसको घाँटीका कोशिकाहरु फाटेका थिए। साइन्स जर्नल बिएमजे केस रिपोर्टमा डाक्टरहरुले बताएका छन्- जब हाच्छिउँ रोक्ने कोसिस गरिन्छ, यसबाट तपाईंको कानमा असर पर्न सक्छ। यसका साथै मस्तिष्कको नसा फाट्न पनि सक्छ। ३४ वर्षीय पीडितले आफूले हाच्छिउँ रोकेपछि गर्धनमा केही समस्या देखिएको बताएका छन्।…
जाडोमा न्यानो महसुस हुने खाना खानुपर्छ । यतिबेला झोल कुराहरूजस्तै चिकेन सुप, मसरुम सुप, भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा कागती, सुन्तला आदि फाइदाजनक साबित हुन्छन् । यसैगरी सुपमा वा तरकारीमा लसुन प्रयोग गर्दा पनि रुघाखोकी तथा ज्वरो आउने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । अमेरिकास्थित एक फर्मास्युटिकल्स एसोसियसनका अनुसार जाडो मौसममा एक गिलास पानीमा ज्वानो, अदुवा तथा दालचिनी हालेर पिए जाडोको फ्लुबाट जोगिन सकिन्छ । भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा सुन्तला, कागती, पालुंगो तथा गोलभेंडाले रोगप्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउनुका साथै जाडोमा लाग्ने रुघाखोकी एवं ज्वरोसँग लड्न सहयोग मिल्छ । त्यसैगरी अण्डाको पहेंलो भागबाट प्रशस्त भिटामिन डी…
कहिले काठमाण्डौंमा राति सरसफाइ गरेर झाडुवाला त कहिले स्वयम्भूको डाँडामा गीत गाएर गाइने । केही समय अघि कैलालीका करिब ३ सय विद्यार्थीहरूलाई झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण गरी झोलावालाको रूपमा पनि प्रस्तुत भए । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय पोसाक या झन्डा दिवसमा उनको भूमिका अहम रहेको ठान्छन् । लक्ष्मण बजगाईँ । आजभोलि उनको व्यस्तता कचाली बाल शिक्षा सदनको लागि छ । समाज निर्माणका लागि आफूलाई जुनै हद सम्म पनि गिराउने र समाज र राष्ट्रको हित चाहने लक्ष्मण बजगाईँ एक सामाजिक योद्धाका रूपमा प्रस्तुत भएको ठान्दछन् । केपी खनाललाई काठमाण्डौमा चिनाउन होस या…